Ra'isal Wasaare Boris Johnson: Maxay uga dhigantahay haddii aan heshiis laga gaarin ka bixitaanka Midowga Yurub? - BBC News Somali
Ra'isal Wasaare Boris Johnson: Maxay uga dhigantahay haddii aan heshiis laga gaarin ka bixitaanka Midowga Yurub?
Image caption Boris Johnson oo sheegay inuu bisha October uu Britain ka saarayo midowga Yurub aax kastaba ha ku qaadatee
Marxaladdi wakhtiga dheer qaadatay ee lagu xulayey ra'sal wasaaraha cusub ee Britain ayaa maanta la soo afmeeray, iyada oo Boris Johnson oo loo doortay guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee Conservative ahna Ra'isal Wasaaraha Britain, wuxuuna wajihi doono caqabado siyaasadeed oo aad u weyn, oo ay ka mid tahay iney dhici karto heshiiska ka bixitaanka midowga yurub ay Britain dooneyso heshiis la'aan inuu ku soo gabagaboobo.
Ra'isal wasaare Boris Johnson wuxuu xilka si rasmi ah uu Theresa May ugala wareegi doonaa Arbacada Barri ah.
Balse waxaa la isweydiinaya "heshiis la'aanta ka bixitaanka Midowga Yurub" waxa ay uga dhigan yahay?
Waa maxay heshiis la'aanta ka bixitaanka Midowga Yurub?
Haddii heshiis la gaari waayo, Britain waxay toos uga baxeysaa midowga Yurub xataa haddii uusan jirin heshiis rasmi ah oo arrintaasi laga gaaray.
Habeen qudha ah, waxaa dhici karta iney Britain ka baxdo ganacsiga iyo kastamka midowga yurub iyada oo la diyaariyey qorshe gacan ka geysanaya sidi loo maareyn lahaa ganacisga ka dhaxeeya waddamada Yurub, si loo yareeyo canshuuraadka ganacsiga ee ay dalalku ka qaadaan alaabada dal kale ka soo gala.
Heshii la'aantuna waxay ka dhigan tahay wuxuu dalka Britain uu toos uga baxayaa ka mid ahaanshaha dhammaan hay'adaha Midowga Yurub sida Hay'adaha Caddaaladda Yurub iyo Booliska Yurub oo u xilsaaran meel marinta sharciga.
Waxaana meesha ka baxayo hay'ada badan oo maamuli jiray dhamman waxyaabaha la xiriira dawooyinka iyo ka ganacsigooda.
Sida oo kale Britain kama qayb qaadaneyso miisaaniyadda Midowga Yurub oo ay sanadki uga qayb qaadan jirtay £9 bilyan oo yuuro oo u dhiganta ($11.2 bilyan) oo doolar.
Image caption Haddii bisha October aan heshiis rasmi ah la gaarin, hal habeen ayey Britain kaga baxeysaa midowga Yurub
Heshiiska ma laga maarmi karaa?
Sida uu dhigayey heshiiskii Theresa May oo seddex jeer baarlamaanka la hor keenay meel marna noqon waayey ayay Britain meel dhigatay 21 bilood oo xilli kala guur ah.
Haddaba, haddii ay dowladda rabto iney heshiis la'aanta ka bixitaanka midowga Yurub iney ka maaranto, baarlamaanka waa inuu meel mariyaa sharci jabinayo, isla-markaana oggolaanaya in mudda kordhin loo sameeyo ama iney gabi ahaanba ka noqdaan heshiiska ka bixitaanka Midowga yurub.
Marki ay baarlamaanka Britain ay ka bixitaanka Yurub meel marintiisa ay diideen muddada waxay ku kordhiyeen ilaa iyo 31-ka bisha October.
Johnson Mowqif noocee ah ayuu ka qabaa heshiis la'aanta ka bixitaanka Midowga yurub?
Boris Johnson waa ra'isal wasaaraha cusub ee Britain wuxuu ballan qaaday UkK inuu midowga Yurub uu ka saarayo dabayaaqada bisha October "intey doontaba ha ku qaadatee".
Xilligi Boris Johnson uu ololaha ugu jiray guddoomiyenimada xisbiga muxaafidka ee Conservative uuna u noqday ra'isal wasaaraha Britain wuxuu yiri "Waxaan diyaar u nahay inaan ilaa iyo 31-ka October aan ka baxno."
Marki laga xaqiijinayey ereyadaasi iyo sida uu u dhigay wuxuu sheegay "Waxay doontaba ha nagu qaadatee waan ka baxeynaa".
Nin ka mid ah taageerayaasha ka bixitaanka Midowga Yurub
Image caption Nin ka mid ah taageerayaasha ka bixitaanka Midowga Yurub
Nin ka mid ah taageerayaasha ka bixitaanka Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu taageerayo in la baddalo heshiiska ka bixitaanka Midowga Yurub ee ay Mrs May soo jeedisay, waxaanna u baahanahay 31-ka October ka hor in heshiis cusub la gaaro, isbeddel yar oo heshiiskaasi lagu sameeyaa inuusan ku qanceyn. "Waxaan u baahannahay heshiis ka bixitaan oo rasmi ah" ayuu yiri.
Madaxweynaha cusub ee midowga Yurub dhawaan loo doortay Ursula Von der Leyen, ayaa waxay sheegtay iney arrinta ay dib uga xoojinayso dhanka Midowga Yurub.
Waxayna sheegtay iney iyadu taagereyso muddo kordhinta ka bixitaanka Midowga Yurub, waxayna intaa ku dartay heshiiska ka bixitaanka inaan marnaba laga wada hadleyn.
Muddada loo qabtay ayaa ah mid aad cidhiidhi u ah oo baarlamaanka Britain looga fadhiyo inta uu fasaxa gelin inuu arrinta go'aan ka gaaro.
Ganacsiga maxay arrintan uga dhigan tahay?
Heshiis la'aanta ka bixitaanka Midowga Yurub, ayaa waxaa ka dhalan kara inaan heshiis laga gaarin heshiiska ganacsiga Britain iyo Midowga Yurub. Ganacsigana inta badan heshiisyada la xiriiro waxa la waafajiyaa shuruucda uu dajiyey Hay'adda Ganacsiga Adduunka (WTO).
Taa waxay ka dhigan tahay alaabada Britain ay soo saarto ee Yurub loo iibgeeyo in canshuur laga qaadayo si la mid ah alaabada waddamada kale ee Yurub ka soo galo.
Image caption Midowga Yurub wuxuu yeeshay madaxweyne cusub, xilkana waxay la wareegeysaa 1-da November
Sida oo kale Midowga Yurub alaabada dhanka Britain ka soo galo waxaa gudaha Yurub looga qaadi doonaa cansuur badan iyada oo weliba baaritaanka adag oo kastamka xuduudaha lagu sameeynayo, taasoo keeneyso iney alaaba badan ay xadka iyo dekadaha sida Dover ay ku uruuraan.
Inkasta oo ay Britain shaacisay, iney wax canshuur ah ay ka qaadeyn 87% alaabada midowga Yurub uga yimaadda oo Britain soo galo oo ka yimaaddo midowga Yurub iyo caalamka intiisa kalaba.
Heshiis la'aanta ka bixitaanka Yurub waxay saameyneysaa laamaha adeeg bixinta Britain, Bangiyda, Ceymiska, Qareennada, fannaaniinta iwm.
Shaqsiyaadka sidey arrintaasi u saameyneysaa?
Haddii ka bixitaanka midowga Yurub heshiis laga gaari waayo waxay saameyneysaa ganacsiga, taasoo keeneyso inuu sare u kaco qiimaha maciishadda qaarkeed.
Kaarka dammaanadda cafimaadka ee EHIC, oo marki hore muwaadiniinta Yurub oo dhan u suuragelinayey iney adeeg caafimaad oo bilaash ah kaga helan isbitaal kasta oo ku yaalla waddamada ka tirsan midowga Yurub, ayaa meesha ka baxaysa haddii ka bixitaanka Midowga Yurub heshiis la'aan uu ku soo gabagaboobo.
Image caption Mudaharaadayaal ka soo horjeeda arriamaha la xiriira xadka Ireland
Qiimaha wicitaanka taleefannada gacanta ayaa sare u kacayo maadaamaa uu shirkadaha qaarkood uu saameynayo heshiiska ka bixitaanka Midowga Yurub.
Safarrada ayaa sida oo kale noqonaya kuwa adkaado oo weliba qaaliyooba.
Muwaaddiniinta Britain u dhashay oo gawaarida ku dhex wadan jiray Midowga Yurub waxay ku qasbanaanayaan iney qaataan leysannada baabuurta lagu wado ee waddamada ay joogaan.
Siduu u saameynayaa arrimaha xadka Ireland?
Cidna ma ogaan karto waxa ka dhacaya xadka Ireland haddii heshiiska ka bixitaanka Midowga Yurub uu isafgarad la'aan uu ku soo dhammaado.
Dadka tageero heshiiskan inuu heshiis la'aan uu ku dhammaado ayaa waxay aaminsan yihiin inuu saameyn doono Teknooloojiyadaha xadka laga isticmaalo.
Image caption Hay'ad madax bannaan oo UK u qaabilsan darasaadka maaliyadda oo ka digtay heshiis la'aanta waxa ka dhalan karo
Haddii heshiis la gaari waayo maxaa ku dhacaya dhaqaalaha dalka Britain?
Dhaqaalayahannada iyo Shariikadaha ganacsiga qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin arrintan haddii heshiis laga gaari waayo ay dhaqaalaha dalka Britain saameyn u geysaneyso?
Tusaale ahaan, Xafiiska arrimaha miisaaniyadda u qaabilsan Britain oo ah hay'ad madax bannaan oo UK u qaabilsan darasaadka maaliyadda waxay ka digtay heshiis la'aanta heshiiska Midowga Yurub ay dhibaato dhaqaale oo aad u weyn ay dalka u horseedi karto.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka dhalan karo oo ay dowladda isha ku hayso waxaa ka mid ah:
Arrimaha xadka oo uu dib u dhac ku yimaaddo
Baaritaannada dadka soo galootiga ah lagu sameeyo oo kordho
Cunta yari ka dhalato
Maciishadaha qaar, sida cuntooyinka iyo shidaalka oo uu qiimahooda kor uy kaco
Ganacsatada ayaa waxaa lagu dhiirrageliyaa inay u diyaar garoobaan dhibaatada ka dhalan karto alaabada kastamka ama xuduudaha ku uruura.
Taageerayaasha heshiis la'aanta waxay sheegeen khatarta ama dhibaatada ka dhalan karto in la buunbuuniyey digninno hadda ka hor laga soo jeediyeyna ay noqdeen kuwa aan sida la sheegay u dhicin.